Kusukela encwadini Uzungu cashless. Ngomqondo yesimanje, kwaphakama umqondo cashless ukuthenga umphakathi ngo-1949.
Esikhathini eside ngaphambi kokuba imali langempela esetshenziswa nezinye izinto imali. Igobolondo esetshenziswa ezifana imali Polynesia. Ezinye izibonelo "imali" itshe, izimpaphe, nenhlanzi izingwegwe ngisho nemfuyo.
Ngisho eGibhithe lasendulo Nombuso WaseRoma esetshenziswa cashless izinkokhelo, isibonelo, at spannmålsköp. Inkampani Western Union yasungulwa ngo edolobheni US Rochester eqhubekayo eNew York State. It elisuka emuva 1851 lapho yayibizwa ngokuthi Mississippi Ukuphrinta Telegraph Inkampani. Western Union uye ngokuyinhloko wasebenza ukuthi imali ethunyelwe zezikhalo emhlabeni wonke. A uhlobo zakuqala amakhadi esikweletu sebevele 1890 ekhulwini eYurophu. 1914 iqale ngo-Western Union ne cashless ukuthenga ngekhadi lesikweletu engasetshenziswa kule amadili bavumelana.
Langempela amakhadi esikweletu eladabuka kwekhulu lama-20, e-United States esikhishwe zikawoyela okunjalo futhi hotel chains. Omunye kunomthelela ukusetshenziswa ezikhulayo lamakhadi amadala zandile bezimoto uma zikawoyela waqala ukukhipha amakhadi. UMnyango ezitolo futhi waqala ngalesi eyishumi ukushicilela uhlobo ukuhlonza amathokheni amakhasimende adayiswa ngesikweletu. Nakuba esitolo mnyango NK asetshenziswe emashumini eminyaka angaphambi kuka langempela amakhadi esikweletu zethusi amathokheni okuqinisekisa. "Credit card" Sweden kuqala kwakungumprofethi okuthiwa NK-ikhadi Ngakho empeleni kwakuwukugcwaliseka mässingspollett olunezinombolo. Esikhathini 60s wanika NK le siqu amakhadi esikweletu ngomqondo wesimanje imodeli US.
Ezinye izinkampani waqala emakhadini ebuntwaneni ukunikela esikweletu nawemali kumakhasimende abo engcono. Lawa kwakungamadodana nzima ukusebenzisa futhi abopha ngokuphelele zale nkampani. Izitolo namanye amabhizinisi ke kwadingeka emakhadi abo. Babalelwa ku-1938 baqala ukulamukela amakhadi nomunye. Amakhadi enziwa 30s ishidi ukunciphisa ingozi mbumbulu. John Biggins we LaseFlatbush National Bank of eBrooklyn owasungula le-credit card kuqala esikhishwe ebhange ngo-1946 Uhlelo, ngokuthi ChargeIT Linked ukuthenga phakathi amakhasimende ebhange futhi abathengisi bendawo.
Indlela Bonke baqala ngempela - Diners Club
Ngomqondo yesimanje, kwaphakama umqondo cashless ukuthenga umphakathi ngo-1949 Indoda okuthiwa uFrank McNamara saziphekela yokudlela Major sika Cabin Grill eduze Empire State Building lapho credit wakhe Izinyunyana Hamilton Credit Corporation kwadingeka ehhovisi lakhe. Wayehamba umngane wakhe, u-Alfred Bloomingdale futhi ummeli Ralph Schneider. Babexoxa izinkinga iklayenti ye abase lent amakhadi esikweletu zabo ezahlukene omakhelwane futhi lapho abaningi babo abakwazanga buyiselani ayikwazanga ikhasimende ukukhokhela izikweletu zayo ukuze McNamara inkampani.
McNamara futhi wathola ukuthi yena ubungekona nge isikhwama sakhe ukukhokhela ukudla. Ngokubhala isignesha yakhe ibhizinisi ikhadi awunika yokudlela kungaba bill kamuva lidlule. Ngokusho umbono jikelele basebenzisana lezi zinto ezimbili McNamara kwadingeka umqondo ukuthi ungaba langempela credit card. Ngo-1950 wasungula inkampani Diners Club kanye nommeli wakhe Schneider.
Inkampani baba umlamuleli phakathi amakhasimende kanye nezinkampani bathenga kusuka. On amakhadi kuqala ebhaliwe amagama ejensi lokukhokha 'phezu amakhadi. Amakhadi wasebenzisa eningi umshayi wezigubhu ukukhokhwa ukudla. Diners Club amakhadi ekuqaleni ukushaja amakhadi okwakusho ukuthi ikhokhwe konke ukweletwa inyanga ngayinye.
Bloomingdale kwaba isikhathi uzakwethu kule nkampani. Ukube kwakungenjalo, wayedume kakhulu njengongase abe yindlalifa esitolo mnyango Bloomingdale futhi förhållade yayo eziyihlazo nge imodeli isithombe Vicki Morgan. Omunye umuntu obalulekile emlandweni Diners Club Matty Simmons. Simmons kwaba phakathi nenkathi iphini likamongameli we Diners Club kodwa Udume kakhulu njengoba ithelevishini kanye ifilimu umkhiqizi.
I-American cashless Snowball kwaba manje ugingqe futhi aba makhulu njalo ngonyaka. Omunye isinyathelo kwaba lapho ibhange ekhishwe lasebhange wokuqala waqala ukuba ikhishwe ngo-1951 yi-Franklin National Bank of Long Island. Ngokushesha, Diners Club mncintiswano nokuningi yalezi zinkampani wakhula waba nomzimba omkhulu imidondoshiya credit card.
American Express yasungulwa ngo-1850 e Buffalo ukufeza express service mail. Kamuva landiswa cash uyisa kanye nemisebenzi ku embonini yezokuvakasha. Henry Wells wasungula American Express kanye uWilliam Fargo noJohane Butterfield. yezinkampani ezintathu aye ahlanganiswa namanye zibe munye. Ekupheleni kwekhulu le-50th, waqala imisebenzi ye-credit card ukuncintisana Diners Club. Le nkampani iye kwadingeka ihambe yayo emhlabeni ithelevishini. American Express uye waba ekomkhulu lawo izakhiwo ahlukahlukene e-New York.
A isikhathi American Express yasungulwa futhi manje Wells Fargo zabantu elinegama elifanayo. G. Wells Fargo ngokukhamba kwesikhathi okuthiwa omunye amabhange esikhulu kunazo zonke emhlabeni. umlando Wells Fargo sika American Express futhi ngakho okwakuthandelene ukuthi kunzima ukuhlukanisa. Njengoba i-American Express umkhankaso ikhadi zayo zokuqala ngo-1958 njengoba yethulwe futhi akhawunti credit. Kuyinto mhlawumbe osomabhizinisi abaye basebenzisa amakhadi American Express. American Express esanda isebenzisana ezinkulu okudayisa uchungechunge Walmart eyenza umuntu enikeza out ikhadi kuqala Bluebird Ikhadi esikhokhelwa.
American Express uyazicabangela ngokwayo ukuba okukhethekile ukuze ngokuya amakhadi eqolo kungukuthi ukubhekana ngqo zokumaketha. Amakhasimende ezibhekwa kabanzi baba amalungu sekhethelo.
Ukuqashwa kuyinto okusikhumbuza ngaphezulu lodge Masonic kuka ibhizinisi. Le nkampani ihlela ukuthenga oddest namasevisi kumakhasimende. Umklamo Kuthi okusikhumbuza impatho-Rolls-Royce amakhasimende abo. Kodwa amakhadi ukubukeka zikanokusho akufanele kuqhathaniswa imoto kanokusho. Kunalokho abayikho 'i trolley ubudala ebolile nge ubulongwe. " Kwenzeka ngezikhathi ezithile encwadini. Le nzondo we ikhadi lesikweletu uthola ingqondo komlobi kushintsha kusuka yokucabanga enengqondo ukuze avale umbani imizwelo engakhi.
Ngakho-ke izinguqulo okukhethekile ngaphezulu amakhadi American Express bebelokhu "ikhadi udumo" uye wasebenzisa konke kusuka Elvis ukuze Zlatan. Ezinye rappers Ubhale ngisho isosha esihlatshelelwayo kwekhadi yakhe ethandekayo. Le ncwadi Cishe kwake unikezwa umbono wokuba nje iqiniso. It is igcwele izizathu eziphikisa namakhadi okuthenga nezinye cashless. Kodwa le ncwadi futhi "hatbok" maqondana cashless kanye empeleni (ekhuluma Zlatan) eyabhalwa umlobi football crazy.
Kodwa inzondo osekelwa amaqiniso. Nokho, Dyngkärran ngenhla, wayeneminyaka okuhlukile okubangwa synapsfyrverkeri nokuguqulwa. Njengoba ekulweni nemifanekiso yezocansi lwezingane kanye nobuhlanga kalula iba siqu ngenxa imizwa yentukuthelo nokunyanyisa njengoba futhi izinkinga emhlabeni izifundo webhuku babe siqu umbhali. Sekube yangasese ngaso sonke isikhathi.
Ngezinye izikhathi ukushintsha incwadi ngolimi siqu kakhulu futhi okuxoxa nokuqukethwe, bese ubuyela "esisemthethweni-encyclopedia sengqondo". Ake yisendlalelo ngoba izingxenye yale ncwadi. Uma Zlatan ukufunda le ncwadi, ngiyethemba ukuthi Uhola ngesibonelo njengoba super Dude ayilo kuqeda "okunethezeka" amakhadi yayo American Express. Ukwenza lokho akwenzayo engcono. Ngetheyiphu credit card we football. Khahlela ke ibhola kakhulu ehlathini lapho kungekho muntu bangayithola. Kukuphi lapho ungehlisa khona-ke zonke kube izilwane zasendle ngakho ngokufanele zishobinge ekhadini. umbhali angaba kanjani lokhu ngokomzwelo uthukuthele? Funda le ncwadi futhi ukuthola ukuthi kungani.
MasterCard kanye ne-Visa - isingeniso
MasterCard (eyasungulwa 1966) kunalokho inhlangano ubambisane amabhange ayizinkulungwane eziningana ukuthi amalungu ngaphandle luyingxenye
Izinkampani ngomqondo ovamile. Kukhona inkampani elinganiselwe ethengisa amalayisense ikhadi. umlando MasterCard bokuqala ixhunyaniswe izinhlangano ezimbili yasebhange amakhadi ezikweletu. Interbank futhi WSBA. It udale iphrojekthi ye-credit card ngokuthi Master Charge. Master Charge ngokukhamba kwesikhathi uqambe kabusha MasterCard. Ukuqala bakhula baba inkampani ikhadi global kwaba ukubambisana phakathi Master Charge futhi ibhange Mexican Banco Nacional. A imininingwane kwendaba kwaba ingxabano ezingokomthetho ezaphakama ngu Worthern Bank ayivunyelwe ukuze ujoyine Master Charge. indlunkulu MasterCard sika manje emzini Ukuthengwa eqhubekayo eNew York State.
Umbukiso iyafana MasterCard inhlangano wokubambisana. Le nkampani is owned by inhlangano ibhizinisi owakhiwa ikakhulukazi amabhange. Kukhona baxhumene kakhulu Ibhange lase-America ukuthi ibhange wokuqala waqala ngokukhipha Visa eyandulela BankAmericard 1958 ikhadi Okokuqala kungenzeka BankAmericard esetshenziswa kuphela California. It okwakwenqatshelwe ukuqhuba yasebhange eqele isimo. Lokhu zagudla ngu namalayisense ikhadi kwamanye amabhange ke. amakhadi esikweletu Iningi
waba baphotha bakhishwe Ibhange lase-America babe inkampani non-efakwe futhi ilungu enganyelwe National BankAmericard.
Isikhathi ngaphambi show wathola igama layo lamanje njengoba wayesekhathele credit card abo kuqala ngokuthi Entrée. Kwakuyisikhathi ikhadi lemali ukuthi kwakuhlobene ke esanda abasafufusa tangcondvomshini ukuqinisekiswa ngokuthi BASE mina BASE II. izinhlelo Okufana Master Charge ngokuthi INAS futhi iNet.
I izingxenye Buka ababe ngaphandle United States zadayiswa 1974 futhi waba ephethwe iqembu amabhange ngokuthi IBANCO. Inkampani okuthiwa National BankAmericard ekugcineni ku-Visa USA. IBANCO uqambe kabusha ekugcineni mayelana Visa International. I lwamakheli lokuqala credit card yenkampani kwaba emzini Fresno, ngesikhathi isinyathelo kaJosefa Williams. Kwabe sekufika entengiso nakwamanye amadolobha California. Le phrojekthi sonakala ngaso sonke isikhathi kokubili nokugxeka nokukhwabanisa. 1970 washintsha wonke amagama umbukiso. Ukuhwebelana kwembulunga yonke wesikweletu lwaqala ekuqaleni US amabhange ishiywe siqu ohlelweni lwabo ikhadi futhi wajoyina noma Master Charge noma BankAmericard ubani ke kamuva owaba MasterCard kanye ne-Visa.
Buka etholwe 1987 igunya ukuba zinakekele yonke okudayisa inethiwekhi Interlink for amakhadi asebhange (inethiwekhi elikhulu lolu hlobo e-United States). Esikhathini '90s umkhankaso Smart Card Visa Cash ezingase ukulayishwa nge izimali nge-ATM. Buka kwaphoqa ukuthuthukiswa kusukela umugqa magnetic ukuba chip amakhadi kuhlanganise into ebizwa-Partner Program. Ngo Manhattan, amabhange Citibank futhi Chase Manhattan ku 90 sekwephuzile ikhadi yokuhlola ukuthi kwaba ngokuphelele akuphumelelanga. Ngokuvamile, abantu icala ikhadi kanye nje. A ngokubambisana ne inkampani search Inthanethi Yahoo waqala ukudala ikhasi lokuthenga ku-intanethi. Bheka zavula nokubambisana ngempela utkonkurerat Microsoft ukuthi abantu kumele ente imali ebhange yabo kukhompyutha yakho. Khombisa izinze e Fresno eCalifornia.
American Express ne-Diners Club amakhadi esikweletu azinikele ngenkathi Visa kanye MasterCard ungapheli. Kulo mBhalo, ngokuyinhloko ilungu amabhange ukuthi ukukhipha amakhadi. I umehluko obalulekile phakathi izinkampani lesikweletu ukuthi abanye ngakho ukukusho ibhange lenze, kanti abanye abanalo. Visa kanye MasterCard zokuxhumana idatha amakhadi inethiwekhi kuyahluka ngobuchwepheshe ezahlukene kakhulu. MasterCard uhlelo, ngokuthi Banknet, Visa sika VisaNet.
Visa kanye MasterCard Ngakho kulawulwa ilungu osebeni njengoba abasebenzisi ikhadi eqinisweni ngokuphelele ezandleni lezi amabhange. Lo mncintiswano phakathi Visa kanye MasterCard ayigelezi nhlobo ngoba amabhange kakhulu angamalungu inhlangano eyodwa futhi amalungu nezinye.
Thola futhi Sears
Thola Usizo lwezezimali noma nje iDemo Thola enye izinkampani abakhulu e-US-credit card. It yasungulwa ngo-1985 division of inkampani ezezimali Dean Witter futhi aba yingxenye Sears.
Thola baba inkampani ezimele ngo-2007 Inikeza ikhadi Discover ikhadi. I lobuchwepheshe amanethiwekhi ikhadi ngokuthi Discover enethiwekhi Pulse. Ikomkhulu Chicago suburban. 2008 wathenga Thola Diners Club leqembu zezimali Citigroup.
Sears, Roebuck & Co. yasungulwa ngo-1886 ngu-Richard Sears futhi esinguAleva C. Roebuck. Sears baba ngokuhamba kwesikhathi kuhlanganise yezinkampani ezinkulu e-US-mail-order. Sears kuhlobene nokuba phezulu Sears Tower Chicago manje esibizwa ngokuthi Willis Tower. I-skyscraper okuyinto isikhathi kwaba Isakhiwo esiphakeme kunazo zonke emhlabeni, kodwa inhliziyo yayibukhuni ephethwe kuze 2004 by Sears.
I isheke kungaholela imvelaphi yabo emuva 1200s. Kodwa sebenzisa wathatha ngempela off kuphela uma ukuhlolwa kwaqala ukuthi asetshenziswe begolide eNgilandi. Ihlola bebelokhu phakathi nawo wonke umlando, ngezinye izikhathi lisetshenziselwa njengoba imali. Isibonelo salokhu kwaba lapho amasosha in the 50s e-Hong Kong wasebenzisa amasheke njengendlela yokukhokha imali. Njalo abadayisi ngemvume isheke ngesiShayina ngokuthenga ngamunye. Kungaba kwenzeke isosha ezinyangeni ezimbalwa kamuva wabona isheke ayezenzé yena wayenokuqonda efeni lakhe.
Credit card kanye isheke isebenze ngokwemibandela yasebhange ngendlela efanayo. Umnikazi we-akhawunti ubhala isheke lemali zazo umamukeli Ungakwazi ke angazihlenga ebhange. akhawunti Ihlola kungenzeka zifakwe (qhathanisa wesikweletu). Othile echazwe efundisa isheke ngokuthi "inguqulo lomnenke ikhadi ebhange" a. Ngo kontantlöshetens ebuntwaneni wakhuluma okuningi mayelana isheke ukuxazulula umphakathi mayelana cashless.
Indoda usuvele vurmade 60 ekhulwini kule isheke futhi cashless umphakathi lapho uJohane Diebold. inkampani yakhe kokukhuluma Diebold Iqembu wadala inethiwekhi eziningana ngendlela yokunikezelana encike kwikhompuyutha amabhange kule eyishumi. ukucabanga Diebold bathonya George Mitchell ababenolwazi isikhundla esiphezulu ku-Federal Reserve (US yasebhange central). Lesi sakamuva bazama ukuthonya amabhange US ukushintshela systems ekhompyutha. It umangalele ukuthi amasheke zazibiza okuyinto sifana kakhulu agumenti lanamuhla imali.
Angitjho babantu ezifana nalezi ezithinta inhlangano American Bankers Association (ABA) kuya ku-1976 ukuphenya ukuthi kungenzeka isheke umphakathi okuxekethile cashless esizayo. Iphinde bamisa ikomiti ngokuthi Hlola Ngaphansi Umphakathi Committee. Maphakathi lokhu kwaba ABA ikhanda ezishintshayo Dale Reistad. I-United States nje kuphela "kontantlöshetens Ubaba" kodwa futhi eziphikisanayo, njalo hlola inombolo wezwe elilodwa. Ihlola khona futhi ithunyelwe izinkampani ukhathazekile sekukhokhwe izikweletu njalo.
Ekuqaleni kwawo-90 kwakungu ukukhokhelwa lwesikhombisa eSweden ngesheke. Kowezi-2000, bangamaphesenti ezincane 0.1 amaphesenti. Nge amasheke ngaleyo ndlela isikhathi sesiphelile amabhange Swedish ezingasho. Akekho amabhange Swedish alokothe ​​kuphela ukushaja amasheke. Khona-ke, lapho ekugcineni ebhange Swedish wakwenza kulandele enye isheke kanye isiphetho kokuvalelwa obuphelele. Njengoba ilukuluku wukuthi ukukhwabanisa isheke kuyicala kulo lonke elase-United States kodwa hhayi zokukhipha i-akhawunti yekhadi.
Nasi imali emlandweni
Esikhathini eside ngaphambi kokuba imali langempela esetshenziswa nezinye izinto imali. Igobolondo esetshenziswa ezifana imali Polynesia. Ezinye izibonelo "imali" itshe, izimpaphe, nenhlanzi izingwegwe ngisho nemfuyo. In the ukungabikho zemali njalo ngezinye izikhathi ukukhokhelwa oddest esetshenziswa. Ngokwesibonelo, wasebenzisa nemigoqo yensimbi njengohlobo lwemali e Sparta ngoba lalihlukene nezwe elingaphandle.
Southwest zemali waqala ukuthi kusetshenziswe izingxenye Asia Minor 600 BC EMpumalanga Eseduze kwaba ngalokho thina manje bizelani kimi eMpumalanga Ephakathi. Kwakuwusuku lydiske seNkosi uCroesus ngubani e 500 BC waqala minting zemali isiliva negolide. Wayebizwa nangokuthi uCroesus nokuphakama kwawo izwi nomuntu kakhulu ocebile. Lapho kusweleke we amatshe ayigugu esetshenziswa kakhulu zethusi. Lokhu kwenzeke, isibonelo, ekuqaleni eRoma. Phakathi Viking Ubudala okungenisiwe zemali kakhulu Sweden esusela emhlabeni Islamic nokusuka aseYurophu. Ukuze amaViking kwaba ukubaluleka esiliva, ngakho ukukhuluma lwemali. Ngakho-ke, ngisho zemali akusebenzi zesiliva nezinto ezihlukahlukene nesiliva njengenzuzo yokukhokha. Kamuva endabeni, kwakukhona amapuleti ezinkulu zethusi isetshenziswa imali.
I-Swedish zesiliva lokuqala ezazenziwa e Sigtuna emhlabeni ngonyaka 1000. Ngasekuqaleni 1500s aqala khona ukubala pennies. Kusukela maphakathi nawo-1800s kwaqala eSweden usebenzise zemali ikhanda (imiqhele bese imiqhele), ngalo lahlukaniswa laba amasenti 100. Lapho omunye Sweden belahla isimiso igolide ngo-1931 wanyamalala umehluko langempela phakathi imali ewuhlweza nengamaphepha. Izinga igolide wayesho ukuthini uma praktien banknotes angase umklomelo igolide inqolobane igolide. Lokhu banknotes ngokuvamile wawusekelwe nesithembiso futhi kutetsemba embusweni. A ithemba isimo njengoba manje akufanele bathembele. I ukuhluleka zezimali isakazeke kakhulu. Kodwa ukholo kunalokho ezimbi ngokheshi kuka yisigqila unconscionable cashless umphakathi okungadingi ugqozi iyiphi ukuzethemba nhlobo.
Lemali umlando nokuthuthukiswa kuhlobene eduze sobuciko bokunyathelisa. Kwakumelwe ekuqaleni uhlobo namarisidi noma izikweletu ngaphambi kokuba abe ukukhokha langempela. Yemaphepha tillverkads kuqala China cishe ngesikhathi esifanayo njengoba zemali langempela beqala ukuza (600 BC). Khona-ke waqala ukusetshenziswa imali yamaphepha njengoba kancane basakaza kusuka China eYurophu Ephakathi. Empeleni Sweden kweyodwa 1600s ngokokuqala ngqá yanikeza imali yamaphepha efanele e-Europe. Okokuqala, ngokutadisha Stockholms Banco ke Endaweni signboards yasebhange futhi ekugcineni Riksbank ekupheleni 1800s. Ngasekuqaleni sicindezelwe kwamanye amabhange kuka amanothi le Riksbank uqobo. Eceleni Sweden, England ephrintiwe imali yamaphepha ngesikhathi.
Numismatics - a sayensi ethakazelisayo futhi umdlalo
Numismatics isifundo esiphathelene zonke zemali. Iphinde kuhlanganisa ngokuhaha fiddling nge futhi ukucinga amathokheni, imali yamaphepha kanye izindondo. Ngisho njengoba umfanyana, umlobi umxhwele obukhulu uhlamvu lwemali izinhlu ezazikhona ngaleso umtapo. Ukuqoqa zemali kanye nokunye okufana nalokho akukona nje kuphela ukuthola izinto kumnandi abanazo ukwazisa, zisondelene ujike futhi ekugcineni kokuma emaphaketheni ezincane ifolda uhlamvu lwemali. Libuye libe indlela ufunde mayelana nomlando we ngendlela efanayo njengoba isitembu ukubuthwa kungaba indlela ukuze ufunde mayelana kwamanye amazwe. Ngezinye izikhathi izinhlamvu zemali ukuba cishe kuphela contact sangempela inkathi yomlando.
Ukuqoqa izinhlamvu zemali ungomunye walabo izinto zokuzilibazisa lapho kukhona izincwadi omkhulu. I numismatikern lokuqala Swedish u-Eliya Brenner. Wabhala ekupheleni the 1600s umsebenzi zemali kabani Isihloko kahle Swedish kungaba into efana "Coin isichazamazwi Svea futhi Göters ezweni". Lesi sigaba futhi esikhundleni nge izincomo ukuvakashela Coin IKhabhinethi eStockholm. Kukhona futhi ezithakazelisayo uhlamvu lwemali amaqoqo e nakwamanye amadolobha isiSwidi. Coin IKhabhinethi cash Museum siqu futhi iqoqo elikhulu kunawo numismatic eSweden. Lo muzi waba Museum ehlukile ngo-1975 futhi wathutha ambalwa eminyaka kamuva Castle Hill.
Omunye umyalezo le ncwadi sika eziyisisekelo iwukubonisa indlela izwe kuyinto ezingasho nokusondela Imininingwane cashless wobushiqela. I imali eningi ukuze zinyamalale kulapho ulahlelekwa Numismatics emangalisayo ngeshwa ukuthonya wakhe ngensingo ngu
ekupheleni intambo emhlabeni ngokomlando yize udabula ingxenye enkulu indaba bese ekugcineni iphula. Manje ngeshwa isikhathi ukuyeka phambi umbhali iqala ukuba babhale incwadi mayelana zemali kanye nomlando wabo. Le ncwadi ngokuqinisekile iningi ngokulondoloza imali yesimanje. Kodwa lena isicelo sina. numismatists Swedish kanye uhlamvu abaqoqi! Hlanganani! Ukusiza ukulwa ukuze alondoloze imali abadala nabasha. Silwe namabutho cashless ukusungulwa umlando.
Vecka 29, söndag 25 juli 2021 kl. 05:27